१ सय ४५ वर्षे यी बृद्धले बताए लामो समय बाँच्न सक्ने भित्री तरिका ! « Surya Khabar
१ सय ४५ वर्षे यी बृद्धले बताए लामो समय बाँच्न सक्ने भित्री तरिका !
एजेन्सीः सबै मानिस धेरै बाच्न चाहन्छन् । तर, संसारकै सबैभन्दा वृद्ध व्यक्तिको चाहना भने अलि फरक छ । इन्डोनेसियाका मबा गोथे अहिले १४५ वर्षका भए । उनको जन्म सन् १८७० मा भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्ययमले जनाएका छन् ।
उनको चाहना भने आम मानिसको भन्दा ठिक विपरित छ । उनले एक टेलिभिजनको तपाईं के चाहनु हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका छन्, ‘मैले चाहेको मृत्यु हो ।’
सबैभन्दा धेरै बाँचेर विश्व समुदायलाई चकित पारेका गोथेको यो चाहनाले स्वभाविक लाग्छ किनकी उनका १० दाजुभाइ र दिदीबहिनी कोही छैनन् । उनका चार श्रीमती मात्र होइन उनका छोराछोरी समेत सबैको मृत्यु भइसकेको छ ।
यी संसारकै सबैभन्दा वृद्ध गोथे पहिलो विश्व युद्धमा ४४ वर्षका थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धमा ७० वर्षका वृद्ध थिए भन्दै अन्नपूर्णले समाचार लेखेको छ ।